Ugqirha weentlanzi | Ngeentlanzi
I-Surgeonfish ekwabizwa ngokuba yi IiTang, Baziwa ngeli gama ngenxa yemiphetho emile ngommese abanayo emazantsi omsila wabo, kwaye inokwenzakalisa kakhulu okanye yenzakalise ezinye iintlanzi kwanathi bantu. Ezi zilwanyana zincinci, eziyinzalelwane yomtya we-Indo-Pacific, kunye noLwandle Olubomvu, zinokufikelela kwiisentimitha ezingama-25 ubude.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba zimbini iintlobo zeefayile ze intlanzi yotyando, ugqirha wotyando oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nogqirha ohlaza okwesibhakabhaka. Iyokuqala inombala oqaqambileyo we-pastel eluhlaza okwesibhakabhaka, ngelixa i-dorsal fin yayo ityheli. Uhlobo lwesibini lwe-surgeonfish yintlanzi eqinileyo kunale yokuqala kwaye inombala ohlaza okwesibhakabhaka onamabala amnyama. Olunye uhlobo esinokulufumana luyi-clown surgeonfish.
Ukuba sifuna ezi ntlanzi echibini lethu Kubalulekile ukuba sazi ukuba zinyanzelekile ngokomgangatho wamanzi, ke ngoko ndicebisa ukuba wazise ezi zilwanyana kuphela xa itanki lilawulwe ngokufanelekileyo kwaye lazinziswa. Ngendlela efanayo, ezi ntlanzi ziintlobo ezinobunkunkqele kwaye zinokutya okuntsonkothileyo, ziyathanda ukutya kwi-algae kunye ne-crustaceans ezincinci eziphilayo, ezinje ngeembaza kunye ne-shrimp.
Nangona luhlobo oluziqhelanisa kakuhle nokuhlala kwitanki enkulu yeentlanzi, kwaye inendawo ngokubanzi kuthe cwaka Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba akufuneki ihlale kunye neentlobo ezithile ezinokuphela ziluma umva wayo. Ukuba i-aquarium ayonelanga ngokwaneleyo, umlo wendawo unokuvela phakathi kwe-congener yabo efanayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Intlanzi yotyando